28 tusaalooyin isticmaalka biyaha qaabeynta | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan u maleynayaa in biyuhu ay ka mid yihiin waxyaabaha maalin walba qiimeyntooda aad loo qiimeeyo oo aan aad u ogaanno inta badan markaan weyno Marka u fiirsashada cunsurkan naqshadaha waxay noqon kartaa ikhtiyaar aad u wanaagsan oo lagu siiyo taabasho ka duwan oo qabow waxa aan qabanno.
El Agua (ka mid ah Laatiin aqua) waa sustancia oo molikiyuulkeedu ka kooban yahay laba atamka dehaydarojiin iyo mid ka mid ah oksijiin (H2AMA). Waxay muhiim u tahay jiritaanka dhammaan noocyada la yaqaan ee nolosha. Adeegsiga ugu badan, biyo waxaan uga jeednaa walaxda ku jirtaxaaladda dareere, laakiin waxaa laga heli karaa qaabkeeda adag wac baraf, iyo qaab ahaan soodhaha Waxaan wacnaa uumiga. Biyaha waxay daboolayaan 71% dusha sare ee Qolofta dhulka.
Taasi waa sababta naqshadahani runtii u xiiso badan yihiin oo noo tusaysa biyaha siyaabohooda kala duwan ugana dhigayaan walaxdaan wax runtii qurux badan. Ha moogaan iyaga ka dib boodka.
Bacardi - Rasaas & Duuliye
Qurux Saafi ah
Burger Xilliga Dayrta
Channelka daahfurka - Nolosha
Dabka & Biyaha
Martini Asti - Elements
Ma jiro qol badan oo loogu talagalay 2
Soo Gudbinta Midnimada
Cabitaanka tamarta Valens
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 28 tusaalooyin isticmaalka biyaha qaabeynta
Xiiso leh ,,, hal abuur badan ,,, Waad ku mahadsantahay tabarucaada
Cajiib ah !!! sida García Márquez uu dhihi lahaa: Realism Magic !!!
Waxaan la yaabi doonaa haddii aan 100% lagu sameeyo Photoshop ama isticmaal barnaamijyada 3D sida RealFlow
Naqshadahani waa kuwo aad u xiiso badan, fikradaha ayaa qulqulaya markaad aragto
Ku jawaab mifafi